I-SERP yanamuhla: Ukubukeka Okubonwayo Emabhokisini we-Google, Amakhadi, Amazwibela Acebile, Namaphaneli | Martech Zone
Sekuyiminyaka eyisishiyagalombili selokhu ngaphoqa amaklayenti ami ukuthi aye kuwo faka amazwibela acebile ezitolo zabo eziku-inthanethi, amawebhusayithi, namabhulogi. Amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha yakwaGoogle asephendukile, aphefumula, ashukumisayo, abe ngamakhasi wakho ukuze uthole ulwazi oludingayo… sibonga kakhulu izithuthukisi ezibukwayo abazenzile ekhasini lemiphumela lenjini yokusesha besebenzisa imininingwane ehleliwe enikezwe ngabashicileli.
Lokho kuthuthukiswa kufaka:
Amabhokisi Ezimpendulo Aqondile ngezimpendulo ezimfishane, ezisheshayo, uhlu, ama-carousels, noma amatafula angahle abe nezithombe zokuzithuthukisa.
Amazwibela Acebile inikezwe ngamawebhusayithi ukukhulisa ukufakwa kwekhasi lomphumela wokusesha ngamanani, izilinganiso, ukutholakala, njll.
Amakhadi Acebile kubasebenzisi beselula abasebenziseka kalula.
Amagrafu Olwazi kubha eseceleni yangakwesokudla ye-SERP enikezela ngezithombe ezikhethiwe nolwazi mayelana nosesho.
AmaPhaneli Olwazi kubha eseceleni yangakwesokudla ye-SERP enikezela ngezithombe ezikhethiwe, ulwazi, amamephu nezinkomba eziqondene nomkhiqizo noma ibhizinisi.
I-Local Pack (noma Iphakethe Lemephu) ziyinhliziyo yemiphumela yokusesha yendawo ngolwazi lwebhizinisi, ukubuyekezwa, namamephu. Lokhu kuqhutshwa kakhulu ngumsebenzi we-Google Bhizinisi Lami ngezibuyekezo nezibuyekezo zomkhiqizo.
Abantu Babuye Babuza nikeza imibuzo ehlobene nezimpendulo ezivela emibuzweni.
Iphakethe Lesithombe i-carousel evundlile emibuzweni ebhekiswe ngamehlo.
Izixhumanisi Zesiza Uhlu olunwetshiwe lwezixhumanisi ezisemqoka ngaphakathi kwamasayithi athandwayo. Kungabandakanya inkambu yokusesha yesayithi ecaciselwe indlela yokusesha yangaphakathi yesayithi.
Twitter i-carousel ibonisa uhlu lwama-tweets wakamuva avela kuma-akhawunti we-twitter.
Ibhokisi Lezindaba iyi-carousel ezwela ngesikhathi yezindaba ezihamba phambili nezindaba eziphambili ezitholakala kumasayithi ezindaba aziwayo.
Ngokwakha idatha yakho nokulandela amazinga we-Schema, umkhiqizo ungathinta kakhulu ukubonakala kwawo kulezi zici ezibandakanyayo ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha - ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuthuthukisa imiphumela yabo esohlwini ekhasini besebenzisa amazwibela acebile.
Kukhona impikiswano engathandeki nakulokhu… iGoogle ekwaziyo gcina abasebenzisi kumakhasi wabo wemiphumela yenjini yokusesha kunokuba uzilethe kumakhasi wakho lapho uya khona. Uma bekwazi ukugcina abasebenzisi lapho, bangahle babe nethuba lokuchofoza izikhangiso, isinkwa se-Google nebhotela. Kepha sawubona… IGoogle ingabanikazi bosesho, ngakho-ke nginovalo lokuthi kufanele udlale umdlalo wabo. Ngiyethemba, njengoba uqhuba imiphumela yenjini yokusesha kusayithi lakho, wenza umsebenzi omuhle ekubambeni nasekuthwebuleni imininingwane yezivakashi zakho ukuze wakhe ubuhlobo obuqondile.
I-Google ayisho nje kuphela ukuthi ukuhlinzeka ngale datha ye-meta kungaholela ekwethulweni okulungile ku-SERP, babuye bachaze ngokugcwele ukuthi amazwibela acebile angathuthukisa ukubonakala kwenjini yakho yokusesha jikelele ngoba ifundisa ubuchule babo kulwazi oluphakathi kwekhasi.
Uma inkampani yakho, abathengisi bakho, nokuqukethwe kwakho kungasebenzisi ithuba amazwibela acebile, uzosala odakeni ngabaqhudelana abakwenzayo. Uma i-ejensi yakho yezentengiso ingakumemezeli ukuze uyisebenzise - udinga ukuthola inkampani entsha. Futhi uma unengqalasizinda ephathekayo noma yakudala engabasekeli, udinga ukufuduka noma wenze isixazululo esikwenzayo. Iziqeshana ezicebile azigcini nje ngokuthuthukisa usesho, ziphinde zibe nomthelela ekulinganisweni kokuchofoza ngaphezu kokucabanga.
Le infographic evela eBrafton, Umhlahlandlela Obonakalayo Waso Sonke Isici se-Google SERP: Amazwibela, amaPhaneli, Izikhangiso ezikhokhelwayo nokuningi, inikeza ukubuka konke kokubuka kokuthi amazwibela acebile kangakanani nedatha ehlelekile ibukeka ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha.
Tags: micodataama-microformatsamazwibela acebilei-schemai-schema markupamakhasi womphumela wokusesha injiniinyokaudonga lomgwaqo odongeniwsj
I-WordPress Hosting Running Slow? Thuthela ekusingatheni okuphethwe
Mar 19, 2012 ku-9: 25 AM
Njengomthetho angiyena umlandeli omkhulu we-infographics, kepha ngithe lokhu kwenziwe kahle futhi wenza umsebenzi omuhle wokuchaza amazwibela acebile - ikakhulukazi ngokuthi bayithuthukisa kanjani i-CTR nokuguqulwa.
Mar 19, 2012 ku-12: 47 PM
Ngiyavuma, Jeff! Benze umsebenzi omuhle.